Yusuf Garaad: Shir Xasaasi ah - Siyaad Barre Vs Mengistu Haile Mariam
Shir Xasaasi ah - Siyaad Barre Vs Mengistu Haile Mariam
Madaxweynaha Yement-ta Koofureed Salem Rubai Ali
& Madaxweynaha Cuba Fidel Castro. Cadan.
Waa Qeybta Saddexaad ee taxanaha Warbixin qarsoodi ah oo uu Hoggaamiyihii Cuba, Fidel Castro oo soo maray Afrikada Bari iyo dalal Carbeed uu Berlin ku siiyay Hoggaamiyihii Jarmalka Bari, Erich Honecker 3-dii Abriil 1977. Qormadii tan ka horreysay waxaan ku soo bandhigay wixii uu kala kulmay Addis Ababa iyo kulankiisii Mengistu. Qormadii ka sii horreysayna waxay ku saabsanayd aragtidii Castro ee socdaalkiisii Muqdisho iyo kulankii uu la qaatay Siyaad Barre. Fadlan qormada koowaad iyo tan labaad akhri ka hor inta aadan u gudbin middan saddexaad.
Fidel Castro wuxuu labada Hoggaamiye ku soo qanciyay in ay ku kulmaan Cadan, Yemen. Qormadani waxay ku saabsan tahay kulanka labada Hoggaamiye.
Markii shirku billowday, durba Siyaad Barre ayaa hadalka la booday. Siyaad Barre waa Jeneraal wax ku soo bartay gumeysi hoostiis. Kacaanka Soomaaliya waxaa hoggaamiya Jeneraallo dhammaantood ku awood badan yeeshay xilliyadii gumeysiga.
Aragti ayaan ka qaatay Siyaad Barre, waa nin cunsuri ah. Cunsurinnimada ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee ku jira. Hantiwadaaggu waa qolof kore oo uu huwan yahay oo ujeeddadu ay tahay in uu indhaha soo jiito. Wuxuu hub ka helay waddammo hantiwadaag ah. Siyaasaddiisa hantiwadaagguna waa mid shacabka loo sheegayo. Xisbigu waxa keliya oo uu u jiraa in uu isaga awooddiisa shakhsiga ah taageero.
Biririf yar oo uu wafdigiisa kula soo tashaday ka dib, wuxuu [Siad Barre] soo jeediyay wadahadal toos ah oo dhex mara isaga iyo Mengistu.
Shirku wuxuu noo socday ilaa 3.15 habeennimo [Abbaaraha xilliga Addinka hore ee salaadda subax]. Siyaad Barre wuxuu diyaarsaday qoraal heshiis ah oo uu ku aqbalayo Guddiga laakiin faraya in ujeeddada ugu weyn ee Guddigu ay tahay in uu xalliyo su’aalaha taagan ee soohdinta Soomaaliya iyo Ethiopia. Markaa Guddigu halkaa ayuu howshiisa ka billaabayaa. Maxay tahay in ay Ethiopianku uga jawaabaan soo jeedintaas daandaansiga ah?
Halkaa marka ay mareyso, waxaa i soo wajahday su'aal adag oo ah in aan hadlo oo aan caddeeyo aragtideyda mowqifka Siyaad Barre iyo in aan uurka ku haysto. Waxaan goostay in aan hadlo, sababahan awgood:
Waxaan caddeeyay in aynaan ku raaci karin Siyaad Barre mowqifkiisa. Waxaan iri mowqifka Siyaad Barre wuxuu halis ku yahay Kacaanka Soomaaliya. Wuxuu halis geliyay Kacaanka Ethiopia. Taasina waxay dhashay khatar ah in PDRY [Yemen-ta Koofureed] ay go'doonto. Gaar ahaan waxaan culeyska saaray in mowqifka Siyaad Barre uu gacansiinayo dadaalka garabka midig ee Soomaaliya lafteeda ee ka dhanka ah Hantiwadaagga, ayna ku doonayaan in ay Soomaaliya u gacan geliyaan Sucuudiga iyo Imbiriyaaliyadda.
Posted by Yusuf Garaad at 15:44:00